1 Mój fanandramako amin’ny StartLogic
2 Szybki start Przegląd logiczny
Mój fanandramako amin’ny StartLogic
Eny, izaho tsy. Mbola tsy naheno momba ny orinasa fandraisam-bahiny aho mandra-pahitako ny fikarohana nataoko tamin’ity tranonkala ity tao amin’ny 2008. Nanao sonia taona iray nanaovana fifanekena tamin’i StartLogic aho tamin’ny 2008 mba hijery sy hamina. Araka ny voalazan’nyjawko taloha, izay navoaka tamin’ny lis 2008, ny rakitra an-tserasera StartLogic dia tao anatin’ny 99,85 – 99,9% – tsy dia ratsy loatra ho an anny gospodarz 5,95 $ / mo saingy azo antoka fa tsy najlepszy hosting na. Ny fanohanan’ny mpanjifa dia somary Kely miadana, saingy amin’ny ankapobeny dia manampy sy namana ny mpiasa.
Pikantsary amin’ny takelaka Startlogic. Ny orinasa fampiantranoana dia nametraka ny vidiny ho 2,75 $ / mo vao haingana.
Startlogic dia mampiditra Strona internetowaBuilder (orinasa EIG hafa) mankany amin’ny drafitra fampiantranoany.
Szybki start Przegląd logiczny
Mitombo ny vidiny aorian’ny fe-potoana voalohany – ny fe-potoana 24-volana dia manavao amin’ny 6,98 $ / mies
Ny tsy fahampian’ny safidy hafa – ianao dia mila manova ny tranokalan’ny web ho fampiroboroboana ny VPS na chmurze hosting
Amin’ny maha mpanome tolotra tranonkala mora vidy, ny Startlogic dia manolotra fahatokian-tena mety sy endri-javatra tsara sasany toy ny mpanamboatra tranokala ary fahazoan-dalana amin’ny dokambarotra maimaim-poana. Na izany aza, tsy misy làlana fampivoarana manan-danja izany, izany hoe raha maniry ianao dia mila manana izany mifindra any amin’ny web host iray.
Manomboka amin’ny 2,75 $ / mc, Nowy Startlogic dia azo antoka fa iray amin’ireo alternatywy web hosting mora kokoa manodidina. Aza adino fa ny vidin’ny mitombo hatramin’ny 5,50 $ / mo aorian’ny vanim-potoana fisoratana anarana.
Tsia, Startlogic dia manolotra drafitra karama fotsiny. Izy irre dia ahitana karazam-pifandraisana maro miaraka amin’ny drafitr’izy ireo, ao koa ny anarana anarana maimaimpoana.